Sei magineti matanda ePasi adzoserwa? | Network Meteorology
Sei magineti matanda ePasi adzoserwa?
ChiGerman Portillo | | Ciencia
Pasi redu rave risingagare rakaita sezvariri nhasi. Pakati pemabhirioni emakore kubva Pasi paakaumbwa, pakave nezvikamu zvenguva yechando, kutsakatika, shanduko, shanduko, kutenderera, nezvimwe. Iyo haina kumbogadziriswa uye yakasimba kudaro.
Chimwe chezvinhu zvachinja uye chisina kunge chakaita seizvi hupenyu hwedu hwese ipasi rinobva raita danda. Anenge makore zviuru makumi mana nezvina apfuura, Nyika yakanga iine polarity yakadzoserwa, ndokuti, danda rekuchamhembe raive kumaodzanyemba uye zvinopesana. Iwe unoda kuziva kuti nei izvi zvichiitika uye kuti masayendisiti anozviziva sei?
1 Inversion mune iyo magnetic pole yePasi
2 Kune here imwe modhi nyowani yePasi?
Inversion mune iyo magnetic pole yePasi
Munhoroondo yese yePasi, shanduko mumagineti matanda akaitika kakawanda, achigara mazana ezviuru zvemakore. Kuti uzive izvi, vesaenzi vanovimba nemiedzo ne zvicherwa zvinopindura kumagineti zvinokurudzira. Ndokunge, nekuongorora kuenderana kwemagineti emaminerari, zvinokwanisika kuziva kuti ndeapi mativi epasi magineti matanda aive nemamirioni emakore apfuura.
Asi hazvisisina kukosha chete kuratidza kuti iwo magineti matanda ePasi anga achichinja munhoroondo yese, asi nei vazviita zvakadaro. Masayendisiti akawana Mahombekombe makuru emarara ane matombo ematombo ayo anomuka nguva nenguva uye anowira pasi pasi redu. Zvinoitwa nematombo aya zvinogona kukonzera shanduko mumatanda ePasi uye zvoita kuti vafuratire. Kuti vawane izvi, vesaenzi vakavakira zvidzidzo zvavo pazviratidzo zvakasiiwa nekudengenyeka kwenyika kwakanyanya kuparadza pasi.
Panenge pamucheto wepakati pePasi pane tembiricha ye4000 ° C kuitira kuti dombo rakasimba richiyerera zvishoma nezvishoma pamusoro pemamirioni emakore. Iyi yazvino yekuratidzira mukati mejasi inokonzera makondinendi kufamba uye kuchinja chimiro. Kutenda kune iyo simbi iyo inogadzirwa uye nekuchengetedzwa musimboti wePasi, Nyika inochengetedza magineti ayo anotichengetedza kubva kumagetsi ezuva.
Nzira chete yemasayendisiti kuziva chikamu ichi chePasi ndeyekudzidza zviratidzo zvekudengenyeka kwenyika zvinogadzirwa nekudengenyeka kwenyika. Neruzivo rwekumhanyisa uye kusimba kwemafungu ekudengenyeka kwenyika vanogona kuziva izvo zvatiinazvo pasi petsoka dzedu uye kuti ndezvipi zviripo
Kune here imwe modhi nyowani yePasi?
Nenzira iyi yekudzidza Nyika zvinokwanisika kuziva kuti kune matunhu makuru maviri muchikamu chepamusoro chepakati penyika apo masaisai enzira inofamba zvishoma nezvishoma. Aya matunhu akakodzera zvakanyanya maererano ne maitiro avanoita iwo ese mantle dynamics, mukuwedzera kune mamiriro nzira iyo musimboti unotonhora.
Kutenda ku kudengenyeka kwenyika kune simba mumakumi emakore apfuura ayo anoita kuti kuve nekugona kwemasaisai aya anofamba achipfuura nemuganhu uri pakati pechidzitiro nejasi rePasi. Tsvagurudzo ichangobva kuitika kumatunhu aya epakati pePasi inoratidza kuti chikamu chepazasi chemukati chine huwandu hwakakwirira (nekudaro chikamu chepasi) uye chikamu chepamusoro chakadzika zvakanyanya. Izvi zvinoratidza chimwe chinhu chakakosha. Uye ndezvekuti izvo zvinhu zviri kuwedzera pamusoro, ndiko kuti, zviri kufamba zvichikwira kumusoro.
MaRegion anogona kunge asina kuomesesa nekuda kwekuti iwo ari kudziya. Sezvakaita nemasaisa emhepo (iyo inopisa inotanga kusimuka), chimwe chinhu chakafanana chinoitika mukati mejasi nepakati pePasi. Nekudaro, zvinokwanisika kuti makemikari akaumbwa enhengo dzejasi ari kuita semadonhwe erambi remota. Ndokureva, kutanga ivo vanodziya uye neizvozvo ivo vanomuka. Kana yangokwira kumusoro, isina kusangana nemukati wepasi, inotanga kutonhorera uye kuva yakaoma, saka zvishoma nezvishoma inodzokera kumashure.
Aya marara-akafanana nehunhu maitiro aizochinja nzira masayendisiti anotsanangura kubviswa kwekupisa kubva pamusoro penzvimbo. Uye zvakare, inogona kushanda zvakakwana kutsanangura kuti sei, munhoroondo yese yePasi, iwo matanda emagineti akadzorerwa.
Dzidzo yakazara: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X15000345
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Meteorology » Ciencia » Sei magineti matanda ePasi adzoserwa?
Gobi renje regwenga rinogadza mhando yemweya weChina
Kunyungudika kweAntarctica kunopa njodzi kuvanhu